CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျွန်တော့် cpe မှာ 192.168.1.254 နဲ့ cpe configuration ကိုဝင်ပီး တစ်ခုခု ပြင်ပီး ၇င် ie browser ကို refresh လုပ်၇င် cpe configuration ကို ပြန်ဝင်လို့မ၇ ဖြစ်နေတယ် reset လုပ် dhcp enable လုပ် browser ကို refresh လုပ် မ၇ပါ ကျွန်တော်လည်း router , cpe လွှင့်ပီး cpe နဲ့ ပြန်ဖမ်းမလို့ပါ။ router ကို dhcp enabe , cpe dhcp enable လုပ်၇င် cpe ကို static ip လုပ်တာက ပိုမြန်ပါတယ်
ကျွန်တော် cpe ကို router ၇ဲ့ lan port မှာ တပ်ပါတယ် cpe ကို dhcp disable ip က ၁၉၂.၁၆၈.၁.၁၀၀
default gateway က ၁၉၂.၁၆၈.၁.၁( router ip) cpe ကို AP mode မှာ ထားတယ် အဲဒါ cpe status basic setting traffic statistics မှာ sent မှာ ကိန်းဂဏန်းတွေ ပြပီး receive မှာ zero ဖြစ်နေလို့ပါ
Last edited by ငအလေး; 23-05-2012 at 10:10 PM..
Find More Posts by ငအလေး
အကိုတို့ရေ Wireless လွှင့်တဲ့ဖမ်းတဲ့နေရာမှာ cpe တစ်ခုထဲပဲလွှင်ပြီး ဖမ်းတဲ့ဘက်မှာ computer ထဲကပါတဲ့ wifi နဲ့ဖမ်းလို့ရရင်
အဆင်ပြေနိုင်မလား ကူညီပေးကြပါအုံး ..ပြီးတော့ လုံခြုံမှုအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာလေးကို ကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါအုံးဗျ ....... ကျေးဇူးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kokyisoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by ငအလေး
ကျွန်တော့် cpe မှာ 192.168.1.254 နဲ့ cpe configuration ကိုဝင်ပီး တစ်ခုခု ပြင်ပီး ၇င် ie browser ကို refresh လုပ်၇င် cpe configuration ကို ပြန်ဝင်လို့မ၇ ဖြစ်နေတယ် reset လုပ် dhcp enable လုပ် browser ကို refresh လုပ် မ၇ပါ ကျွန်တော်လည်း router , cpe လွှင့်ပီး cpe နဲ့ ပြန်ဖမ်းမလို့ပါ။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကို ကျွန်တော်တစ်ခါကြုံဖူးပါတယ်။ ဖြစ်တာက .....
CPE ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ တပ်ပြီး Configuration လုပ်ဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာရဲ့ IP ကို 192.168.1.* (* = 1-253) ဆိုပြီး ပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Configuration ၀င်တယ်။ နောက်တော့ CPE ကို IP ပြောင်းလိုက်တယ် ... ဥပမာ.... 192.168.2.254 ဆိုပြီးတော့လေ ...။ ပြီးတော့ Browser ကို Refresh လုပ်တော့ ဘာမှမတက်တော့ဘူး။
ဖြစ်တာကတော့ CPE နဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ IP Series မတူတော့လို့ ထင်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာ IP ကို Obtain ပေးရင်ပေး / မဟုတ်ရင် ကွန်ပျူတာကိုလည်း 192.168.2.* ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အဲဒီလို ကွန်မျူတာကို IP ပြောင်းပြီး Browser ကို Refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
အကိုတို့ရေ Wireless လွှင့်တဲ့ဖမ်းတဲ့နေရာမှာ cpe တစ်ခုထဲပဲလွှင်ပြီး ဖမ်းတဲ့ဘက်မှာ computer ထဲကပါတဲ့ wifi နဲ့ဖမ်းလို့ရရင်
ကို [COLOR="rgb(0, 191, 255)"]kokyisoe[/color] ပြောတဲ့ထဲမှာ သိပ်မပြည့်စုံလို့ပါ ....။ CPE တစ်ခုတည်းနဲ့ လွှင့်လို့ရသလို ကွန်ပျူတာထဲကပါတဲ့ Wifi နဲ့ ဖမ်းလို့လဲ ရပါတယ်....။ အဆင်ပြေနိုင်မလား ????? ဆိုတာကတော့ kokyisoe ရဲ့ လွှင့်တဲ့နေရာ နဲ့ ဖမ်းတဲ့နေရာရဲ့ အကွာအဝေး ရယ် ...။ လွှင့်တဲ့ Connection ရဲ့ Speed ရယ်အပေါ်မှာ မူတည်မယ် ထင်ပါတယ်။ CPE က ကြားခံ အဆောက်အဦ၊ အပင်တွေ များရင် သိပ်ဝေးဝေး မရောက်ပါဘူး။
kokyisoe အနေနဲ့ .... ဥပမာ
Wifi လွှင့်တဲ့ ဆိုင်က /အိမ်က/ရုံးက နေ CPE နဲ့ လွှင့်ပြီး Connection မိတဲ့နေရာကနေ သုံးရမှာပါ။ CPE တစ်လုံးတည်းဆိုရင်တော့ လွှင့်တဲ့နေရာနဲ့ ဖမ်းတဲ့နေရာ သိပ်ဝေးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကြားခံကြီးကြီးမားမား ဘာမှမရှိရင်တော့ မိုင်ဝက် - တစ်မိုင် လောက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
လုံခြုံမှုအတွက်တော့ ကို azp09 ၇ှင်းပြထားတာတွေ ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့ Page-1 မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ kokyisoe ရဲ့ Wifi Connection စ,ထွက်လာမဲ့ CPE ရဲ့ Security ကိုလုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ Router ကနေမှ CPE သို့တစ်ဆင့်ထွက်တယ် ဆိုရင် ROUTER မှာတင် Security လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ (၁၀၀% လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ ပြောလို့မရပေမဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ လုံခြုံပါတယ်။)
အပြည့်အစုံလေး မေးစေချင်ပါတယ်။ သေချာ ဂဃနဏ မသိပေမဲ့ သိသလောက်လေးကို အချိန်ပေးပြီး ကူညီပေးပါမယ်။
Last edited by ဇာနည်စိုး; 06-06-2012 at 10:43 PM..
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုကြီးထွန်း, မောင်ပေါ်ဦး, azp09, bagothar85, crush, tu tu, zo
CPE မှာ Rooming လုပ်လို့ရပါသလားခင်ဗျာ..ရတယ်ဆိုရင်လည်းအသုံးပြု့နည်းလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ....
Originally Posted by mohonaungchit
မရှက်တမ်း ၀န်ခံရရင်တော့ mohonaungchit မေးထားတဲ့ Rooming ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နားမလည်ပါဘူး။ Rooming လုပ်တယ် ဆိုတာ ဘာ့ကြောင့်လုပ်တယ်၊ ဘာ့အတွက်လုပ်တယ် ဆိုတာကို မသိပါဘူး ခင်ဗျာ ...။
Rooming လုပ်တာကို နည်းနည်းရှာကြည့်ပါသေးတယ် .... ဆိုင်/မဆိုင် တော့မသိပါဘူး ... ဒီနေရာလေး မှာ နည်းနည်းတွေ့ပါတယ် ...။ (အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းလို့ ဖတ်ကြည့်တာ နားမလည် ပါဘူး .... )
CPE (TL-WA5210G) ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ် ....။
နည်းပညာ ကျွမ်းကျင် နားလည်တဲ့ ညီကိုများ ၀င်ဖြေပေးပါလိမ့်မယ် .......
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, azp09, crush, zo
ညီနောင်တို့ရေ ရေးထားတဲ့ပို့စ်အားလုံးကို ပေါင်းချုံ့ပြီး တပေါင်းတည်းလေ့လာရယင် ပိုအဆင်ပြေလောက်တယ်ဗျ။ အခုတော့ လေ့လာယင်း မျက်စိလည်လည်သွားတာ။ ကျွန်တော်လည်း ဖမ်းမရဖြစ်နေတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အားလုံးကို တပေါင်းတည်းဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်ချင်သေးတယ်။ ညီနောင်တို့တင်ထားသမျှတွေကို တပေါင်းတည်းလုပ်ချင်ပေမယ့် လေ့လာသူ တယောက်အနေနဲ့ သို့မဟုတ် စမ်းချင်သူတယောက်အနေနဲ့ မ၀ံ့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး တပေါင်းတည်းပို့စ်တင်ပေးစေလိုပါတယ် တင်ပေးသမျှ ညီနောင်တို့ရေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကိုကြီးထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော်ခက်ခဲနေတာကဗျာ 4GHz High Power Wireless Outdoor CPE (Model No:TL-WA5210G)ကို WiFiလွှင့်တဲ့ Groupတခုကနေ အင်တာနက်ကို ၀ယ်သုံးပါတယ်။ အခုလိုင်းအသစ်ကို ပြောင်းဖမ်းချင်တဲ့အခါမှာဆိုယင် မူရင်းလိုင်းပဲ မိတယ်။ အကိုတို့လမ်းညွှန်သလို့ sittingထဲဝင်တော့လည်း မရဘူးဗျာ။ လိုင်းအသစ်လည်း မ၀င်နိုင်ဘူးလေဗျာ။ ဖြေရှင်းပုံလည်း အသေးစိတ်လေး သိချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကူညီကြပါအုံး။ ကျွန်တော်လည်း လေ့လာသူတယောက်ပါ။ Ipပြောင်းမယ်ဆိုပြီး Browserက ၀င်တော့လည်း ရဘူးဗျာ။ လိုင်းမရှိလည်းဝင်ရသလား။ သို့မဟုတ် လိုင်းရှိမှ ၀င်ရသလားလည်း မသိဘူးဗျာ။ မျှော်လင့်လျှက်။
19-06-2012, 05:20 PM
ကိုကြီးထွန်းေ၇.... CPE wifi ကို internet ပေးသူတစ်ဦး မှ တခြား တစ်ဦးဆီသို့ပြောင်း ယူချင်တာ ထင်တယ်...
အဲလိုပြောင်းချင်တာဆို၇င် .... ကိုကြီးထွန်းပြောသလို Setting ထဲ ကို Browser ကနေ ပြီးဝင်ဖို့ .....
1) CPE ဘူး၇ဲ့ ip
2) CPE ဘူးထဲ ကို ၀င်ဖို့ username
3) CPE ဘူးထဲ ကို ၀င်ဖို့ password
အဲဒီ သုံးခု သိဖို့လိုပါတယ်... CPE ဘူး၇ဲ့ ip ကို တော့ Computer ၇ဲ့ RUN BOX မှာ ipconfig /all လို့၇ိုက်လိုက်၇င် သိနိင်ပေမယ့်... username နဲ့ password ကိုတော့ CPE ဘူး ကို ဆင်သွားတဲ့ သူပဲ သိနိုင်မှာပါ... များသောအားဖြင့် internet ပေးသုံးသူတွေဟာ အဲဒီ username နဲ့ password ကို Client user တွေကို အသိပေးလေ့မ၇ှိပါဘူး...
ကိုကြီးထွန်း လို internet ပေးသူ တစ်ဦး မှ နောက် တစ်ဦး ဆီသို့ပြောင်းချင်သူတွေ အတွက် အခက်အခဲဖြစ်လေ့၇ှိပါတယ်...
အကယ်၍ internet ပေးသူ တစ်ဦး မှ နောက် တစ်ဦး ဆီသို့ပြောင်းချင် တယ် ဒါပေမယ့် username နဲ့ password ကိုလည်း မသိတဲ့ သူတွေ အတွက် Hardware reset နည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.... Hardware reset နည်းကတော့ တိုင်ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီး ချ၇တဲ့ အတွက် အလုပ်တော့ ပိုပြီး၇ှုပ်တာပေါ့.... Hardware reset ချဖို့ အသေးစိတ် ကို... ကို ဇာနည်စိုး ၇ှင်းပြထားတာ ကိုပြန်ပြီးတော့ လေ့လာကြည့်ပါ
Last edited by azp09; 19-06-2012 at 05:23 PM..
ဇာနည်စိုး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, aungphyo, bagothar85, tu tu, zo
အကယ်၍ internet ပေးသူ တစ်ဦး မှ နောက် တစ်ဦး ဆီသို့ပြောင်းချင် တယ် ဒါပေမယ့် username နဲ့ password ကိုလည်း မသိတဲ့ သူတွေ အတွက် Hardware reset နည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်....
ကိုကြီးထွန်း အနေနဲ့ Internet Connection ပေးတဲ့သူ အခြားတစ်ယောက်သို့ ပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း CPE ကို Reset ချလိုက်ပြီးလို့ Default User Name, Password တွေနဲ့ ၀င်လို့ရသည့်တိုင်အောင် ကိုယ်ယူသုံးချင်တဲ့ Internet ဆိုင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်တွေ လိုအပ်ပါအုံးမယ်။ ခွင့်ပြုချက်တွေ ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူတို့လွှင့်ပေးထားတဲ့ Security အမျိုးအစားတွေ ပါပါတယ်။ CPE ကို Configuration ပြန်ဝင်ရင် ဒီအချက်တွေကို သိမှ ရပါမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ ဆိုင်ကကျွမ်းကျင်တဲ့သူကို ပြောင်းခိုင်းလိုက်တာ အသင့်တော်ဆုံးပါဘဲ။ သူတို့အနေနဲ့လည်း Security ပိုင်းတွေကို အလွယ်ပြောပြမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ပါ။
မောင်သံသရာ, aungphyo, azp09, bagothar85, tu tu, zo
ကျွန်တော်မေးတာကို ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ azp09နှင့် မောင်ဇာနည်စိုးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုလေ့လာသော ညီနောင်တို့တွက်လည်း အကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်သုံးမယ့် ဆိုင်ကိုပဲ အကူအညီတောင်းပြီးသုံးပါတော့မယ်ဗျာ။ လေးစားလျှက်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကိုကြီးထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, မောင်သံသရာ, azp09, zo
browser ကနေ link တစ်ခုကို ခေါ်လိုက်တာနဲ့ user name နဲ့ password တောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်သလဲ ဆိုတာ ၁ဆင့်ခြင်း ဆီ ပြောပြပေးပါလား azp09 ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဒီလို လေးတွေတင်ပေးလို့လေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ usmarinearmy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by usmarinearmy
Originally Posted by usmarinearmy
ကို usmarinearmy ပြောသလိုမျိူး browser ကနေ link တစ်ခုကို ခေါ်လိုက်တာနဲ့ user name နဲ့ password တောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်သလဲ ဆိုတာ.... ကျွန်တော်တော့ မသိပါဘူး...
ကြားဖူးတာတော့ Antamedia Hotspot လို Sofware မျိုးကို သုံးပြီး WiFi hotspot ထောင်လို့၇တယ်လို့တော့ ကြားဖူးပါတယ်...
apaekhanlay@gmail.com ka may sa yar shi lot par asin ma pay lot myanmar lo ma type khae woo thank
Find More Posts by Bawat
Originally Posted by Bawat
ကို Bawatေ၇.... မိမိတွေ့ကြုံနေ၇တဲ့ အခက်အခဲ လေးတွေကို Myanmarfamily.org ဖို၇မ် အောက်က သက်ဆိုင်၇ာ Thread တွေ၇ဲ့ အောက်မှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.... ကျွန်တော်အပါအ၀င် မြန်မာမိသားစုဝင်တွေက အလျည်းသင့်၇င်သင့်သလို ပါဝင် ကူညီကြမှာပါ ....
gmail ကို add ပြီး (private )အမေးအဖြေလုပ်တာထက်စာ၇င် ဖို၇မ်မှာေ၇းတာ , မေးတာ တွေက internet ၇ှိတဲ့ မည်သည့်အ၇ပ်မှာမဆို ၇ှိနေတဲ့ မြန်မာမိသားစု အားလုံးအတွက် လေ့လာနိုင် , ကြည့်၇ှုနိုင်တဲ့ အတွက် .... ဖို၇မ်မှာပဲ public မေးတာက ပိုပြီးတော့ အကျိုးများမယ်လို့ထင်ပါတယ်....
ကို Bawat CPE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲဆို၇င်တော့ ဒီ thread အောက်မှာမေးလို့၇ပါတယ်... ကျွန်တော်အပါအ၀င် မိသားစုဝင်များက သိ၇င်သိသလို ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာပါ.... မသိတဲ့ အကြောင်းအ၇ာဆို၇င်တော့လဲ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့
နောက်တစ်ခု မေတ္တာ၇ပ်ခံချင်တာတော့ .... မြန်မာ font နဲ့၇ိုက်ဖို့ အဆင်မပြေဖူးဆို၇င် English လိုမေးစေချင်ပါတယ်..... ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း E အ၇မ်းကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး... E ညံတဲ့ဘက်ကိုတောင်ပါ နေပါတယ်.... ဒါပေမယ့် ဘားဂလိပ် နဲ့၇ိုက်တာနဲ့ စာ၇င် English ကပိုပြီးဖတ်၇တာ အဆင်ပြေလို့ပါ ....
Last edited by azp09; 05-07-2012 at 05:10 PM..
ကျွန်တော် လည်း CPE ထောင်ချင်တာ ဘယ်လောက်ကုန်မလည်း မသိဘူး တမိုင်ပါတ်လည် 360` ပေါ့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် apaekhanlay@gmail.com ကို အက်ပြီးပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Bawat အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
360 ' ကို 1မိုင် လောက် လွင့်ချင်တာဆို၇င် CPE ဘူး4ဘူးထောင်၇င်၇ပါတယ် 1 မိုင်လောက်ကိုေ၇ာက်ချင်တယ်ဆို၇င် အဓိက ကတော့ လွင့်တဲ့ဘက်ကေ၇ာ ဖမ်းမည့်ဘက်ကေ၇ာ မြင့်မြင့်ထောင်ဖို့ပါ .... tplink CPE ( G series ) ဘူး တစ်ဘူးကို 38,000 kyat ပတ်ဝန်းကျင်လောက်၇ှိပါတယ်.... နောက်ပြီးတော့ Switch တစ်ခုလည်းလိုအပ်ပါတယ် ... အကယ်၍ LAN port 4ခုပါတဲ့ wireless Router ၇ှိပြီးသားဆို၇င်တော့ Switch ကိုဝယ်စ၇ာမလိုပါဘူး .... အကယ်၍ Switch ၀ယ်၇မယ်ဆို၇င် tplink switch ကို သုံးကြတာများပါတယ် 1,2000 ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်၇ှိမယ်ထင်တယ် (ဈေးနှုန်းတွေက အတိအကျတော့ မဟုတ်ပါ ... အပြောင်းအလဲ၇ှိနိုင်ပါတယ် )
တပ်ဆင်ပုံ , တပ်ဆင်နည်း , configure ချ နည်းများကိုတော့ မိသားစုဝင်တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြတဲ့ အပ်ါမှာေ၇းသားထားတဲ့ post များကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်....
Bawat ခင်ဗျာ ....
ကို azp09 စတင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ အထဲမှာ CPE အသုံးပြုပုံတွေ အများကြီးပါပါတယ် ......။
တကယ်တော့ CPE ထောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အခြေအနေတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် ....။ သာမန်အနေအထားအရ ဆိုရင်တော့ Bawat ပြောတဲ့ တစ်မိုင်ပါတ်လည် အတွက် Base Station မှာ Access Point Mode (AP) (3) လုံး (သို့မဟုတ်) (၄) လုံးထားလိုက်ရင် ရပါတယ် ....။(CPE TL-WA5210G က မျက်နှာမူတဲ့ ဘက်သို့ ဘေးဘယ်ညာ ၆၀ ဒီဂရီ၊ အပေါ်အောက် ၃၀ ဒီဂရီ လွှင့်ပေးပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ၃၆၀ ဒီဂရီ အတွက် CPE (6) လုံးလိုအပ်မယ်ဆိုပေမဲ့ (၄) လုံးလောက်ဆိုရပါတယ်။ ပတ်လည်အတွက် Outdoor Omni-directional Antenna ဆိုတာရှိပေမဲ့ သိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိဘူးထင်ပါတယ် (ကျွန်တော့်ယူဆချက်သာဖြစ်ပါတယ်။)) CPE ရဲ့ ဈေးတွေကတော့ 30000 ကနေ 40000 လောက်ထိ ရှိနိုင်ပါတယ် (ယခုနောက်ဆုံးဈေးကို မသိပါ။) ဒီတော့ တစ်သိန်းကျော် နှစ်သိန်းလောက်တော့ ကုန်ကျနိုင်ပါတယ် ....။ Network Cable တွေအတွက်ပါဆိုရင် သုံးသိန်းကျော်လေးသိန်းနီးပါးပေါ့ ဒါက အကြမ်းဖျင်းပြောတာပါ ...။
CPE ထောင်တဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ Network ကို ပြန်ပြီး ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့သဘောပါ ...။ ဒီတော့ ကိုယ်လွှင့်ပေးချင်တဲ့ Network Plan ကို အရင်ဆုံး ချရေးထားဖို့ လိုအပ်ပါမယ် ....။ ဒီ Network Plan အပေါ်မူတည်ပြီး
အဆင့်(၁) ပစ္စည်းတွေ စုဆောင်းမယ်။
အဆင့်(၂) CPE တွေကို Configuration ၀င်မယ်။
အဆင့်(၃) ကိုယ့် Network ကို စစ်ဆေးမယ်။(ဘယ်လောက်အကွာအဝေးထိ မိလည်းဆိုတာကို စစ်တာပါ။)
အဆင့်(၄) Network အတွင်းလိုတာလေးတွေ ဖြည့်စွက်မယ်။ (လိုင်းအားမကောင်းရင် Repeater CPE တစ်လုံးထောင်သင့်ရင် ထောင်ရပါမယ်။)
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး ပြည့်စုံတဲ့ Wifi Network တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ ....။
Network Plan ဆိုတာက
ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ Network အမျိုးအစားနဲ့ Speed အပေါ်မှာ Client ဘယ်နှလုံးလောက်ပေးလို့ရမလဲ?
ကိုယ့်ဆီက Wifi ယူသုံးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Base Station ရဲ့ ဘယ်အရပ်မျက်နှာ၊ ဘယ်လောက်အကွာ အဝေးမှာ ရှိကြသလဲ?
Base Station နဲ့ Client တွေကြားမှာ ကြားခံမီဒီယာ(သစ်ပင်ကြီးတွေ၊ အဆောက်အဦကြီးတွေ) ရှိသလား?
ဒီအချက်တွေပေါ်မှာ ဦးစွာစဉ်းစားပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ ပုံကြမ်းဆွဲကြည့်ပါ။ လိုအပ်ရင် Google Map, Google Ruler တွေကို သုံးလို့ရသလို TP-LINK ရဲ့ Wireless Calculator ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်....။ ဒီလို စာရွက်ပေါ်မှာ Network Plan အရင်ဆွဲထားတာက တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက် မြန်ဆန်စေပါတယ်....။
Bawat လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံကိုသာ ဒီဖိုရမ်ထဲမှာ ပြောပြပေးပါ .... ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အ၀ မရှိပေမဲ့ တတ်သလောက် လေးတွေ ကူညီစဉ်းစားပေးပါမယ် ....။ ဘာလို့ ဖိုရမ်မှာဘဲ ဆွေးနွေးချင်ရသလဲ ဆိုတာ ကို azp09 အပေါ်မှာရှင်းပြပြီးပါပြီ ....။ Bawat အပါအ၀င် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိနိုင်သလို ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးလည်း ၀င်ရောက်စဉ်းစားပေးလို့ ရနိုင်တဲ့အတွက်ပါ ...။
အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားလျှက် .......
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဇာနည်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
azp09, nandarnaing007@gmail.com, tu tu
ကျွန်တော်လက်၇ှိသုံးနေတဲ့ CPE Network Diagram လေးပါ .... မနေ့က keynote presentations sofware ကို အသုံးပြုပြီး Create လုပ်ထားတာပါ .....
Internet Source ကတော့ စကိုင်းပျက် ... အဲအဲ ... sorry မှားလို့ .. စကိုင်းနက် ကို အသုံးပြုထားပါတယ် ....
Last edited by azp09; 12-07-2012 at 12:51 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, သန့်ဇင်ဌေး, crush, nandarnaing007@gmail.com, tu tu
ကျွန်တော်လည်း နယ်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ wifi လည်းပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ပုံစံက
Sky Net ----> D-link router DIR-615----> CPE WA-5210G---->External antenna
ANT-2415D(TP-link) ဖြစ်ပါတယ်။ ။တိုင်အရှည်ကြီးထောင်ပြီးတော့ အဲဒီတိုင်ပေါ်မှာပဲ cpe နဲ့ အင်တာနာတိုင်ကို pigtail ကြိုးနဲ့ဆက်ထားတာပါ
AP-Mode နဲ့လုပ်ထားပါတယ်။ DHCP က disable ပေးထားပါတယ်။ wireless basic setting ထဲမှာ channel က 11 ပါ။ Advanced wireless Settings ထဲက Antenna Settings က external ကိုထားပါတယ်။ Distance Setting ထဲက Adjust option မှာ Manual။ Distance မှာက 52 ပါ။
Security Settings က disable ထားပြီးတော့ MAC address နဲ့ပဲချုပ်ပါတယ်။ ဒီပုံစံနဲ့အခုတော့အဆင်ပြေနေပါတယ်။
အဲလိုပုံစံ မထားခင် channel က4ထားပြီးတော့ Antenna Settings က vertical ထားပါတယ်။ security ကWPA-PSK/WPA2-PSKထားပြီး version ကို auto ပဲထားမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆိုင် ပတ်ဝန်းကျင်က လက်တော့နဲ့ ဖမ်းထာအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။signal က 2တိုင်ခန့်သာ၇ှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် window xp နဲ့သိပ်အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျ။ရတဲ့အခါရပြီးမရတဲ့အခါမရပါ။ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့ WPA-PSK/WPA2-PSK နဲ့သိပ်အလုပ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ version ကိုပဲမပြောင်းမိလို့အဆင်မပြေတာလား တော့ မပြောတတ်ပါ တစ်နေ့တော့ဆိုင် နဲ့အဝေး (မိုင်ဝက်ကျော်ကျော်)
က cpe နဲ့ဖမ်းပါတယ်။ signal က19နဲ့20 ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လိုင်းမရပါဘူးခင်ဗျ။ ဆိုင်ကိုပြန်လာပြီး channel ကို 8 သို့ပြောင်းပါတယ်။ ပြန်သွားဖမ်းပါတယ်။အဲနေ့ မိုးလေ၀ါသလည်းသိပ်မကောင်းလို့ ပြန်လာပါတယ်ဖမ်းလို့မရခဲ့ပါဘူး။အဲနေ့ပါ ပဲ ဆိုင်နားကတစ်ယောက်ကလိုင်းကောင်းချင်လို့ဆိုပြီးcpe နဲ့ ဖမ်းပေးပါတယ်ခဏလေးပဲကြာပါတယ်ဖမ်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အဝေးက အိမ်မှာအဆင်မပြေခဲ့တော့ ကျွန်တော်
လည်း CPE ၀ယ်တုန်းက ပါလာတဲ့ GUIDE စာအုပ်လေးကို ပြန်ဖတ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပဲ Antenna Settings က external ကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ ဆိုင်နားကတစ်ယောက်သူ့လက်တော့လာပေးပါတယ် ။
အင်တာနက်သုံးလို့မရလို့ပါတဲ့။ ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ထဲကပဲဖမ်းပါတယ်ခင်ဗျ။လုံးဝမရပါဘူး။ ဆိုင်မှာရှိတဲ့
လက်တော့ တွေနဲ့လည်းဖမ်း ပါတယ်။ ဖမ်းတဲ့နည်းအမျိုးနဲ့ဖမ်းပါတယ်။ဆိုင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကြိုးနဲ့ ဆွစ်နဲ့သုံးနေတဲ့စက်တွေက အင်တာနက် လိုင်းရနေပါတယ်။ Wifi ကလုံးဝဖမ်းလို့မရဘူးခင်ဗျ။Wireless Statistics ထဲမှာဝင်ကြည့်တော့လည်း ညနေက CPE နဲ့ ဖမ်းပေးထားတဲ့တစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။
Wireless Statistics မှာဝင်ကြည့်ရင် Wifi သုံးနေရင် သုံးနေတဲ့ စက်ရဲ့ mac address တွေပေါ်ပါတယ်။
ဖြစ်နေတဲ့သဘောက cpe မပါပဲဖမ်း လို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့သဘောပါ။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း laptop တွေ နဲ့ ပဲ ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းနေပါတယ်။ ည 1နာရီသာကျော်သွားပါတယ်။မရပါ။ Channel ကိုပြောင်းလိုက် ဖမ်းလိုက် ဖမ်းနေတာ တစ်ခေါက်ရပါတယ် ပြန်ဖြုတ်ပြီးပြန်ဖမ်းတော့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျ။ security နဲ့ ငြိတယ် ထင် ပြီး
security ကို လည်း ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။မရပါ။signal က 2တိုင် 1တိုင် 3တိုင် ပတ်ဝန်းကျင်ပါ ပဲ။ မနက်မိုးလင်း မှပဲဝယ်တဲ့ဆိုင် ကိုမေးတော့ channel ကို 11 သို့ပြောင်းလိုက်ပါတဲ့။ အဲလိုပြောင်းလိုက် တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ခင်ဗျ။ဆိုင်နားပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေ လည်း cpe မပါပဲ ဖမ်းလို့ အဆင်ပြေသွားပါ တယ် ။ signal က 4တိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဝေးက CPE နဲ့ ဖမ်းလို့လဲအဆင်ပြေသွားပါတယ် ။ Signal ကလည်း 30 db ထိရပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာ က တိုင်နားက ဖမ်းတာဘာဖြစ်လို့ signal တိုင်က အပြည့်မပြတာကိုပါ။ cpe နဲ့လိုင်းယူထားတဲ့သူတွေက ကြိုးနဲ့မသုံးပဲ wireless သုံးချင်ကြပါတယ် ခင်ဗျ။ အဲဒါ ဘယ် mode နဲ့ဖမ်းရပါမလဲ ခင်ဗျ။ ပြီးတော့ download speed ကိုလည်းကန့်သတ်ချင်ပါတယ်။ သိတဲ့သူများဖြေကြားပေးကြပါခင်ဗျား ။ဒီဖိုရမ် ကိုဒီတစ်ရက်နှစ်ရက် ကမှဝင်ဖြစ်တာပါ။ အရမ်းကောင်းတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုပါ။ ဒီဖိုရမ် ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် လေးလည်းလေးစား မိပါတယ် အစတုန်းက ဒီလောက်ရေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပါ ။ရေးထားတာဖတ်ဖို့လောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖိုရမ် ထဲက မသိမဖြစ်တဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေလိုက်ဖတ်ရင်း ဒီလောက်ရေးဖြစ်သွားတာပါခင်ဗျား အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ crush အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, azp09, tu tu
ပြောတဲ့အချက်တွေမပြည့်စုံသေးလို့ဆက်ပြောတာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော့်မှာ DHCP ကို disable ပေးထားပေမယ့် mac address ကို သုံးမယ့်သူတွေရဲ့ mac address ကို router မှာမထဲ့ရပဲ cpe ထဲမှာပဲ ထဲ့ပေးရပါတယ်။ အဲဒါအမှား ဖြစ်နေမလားလို့ပါ ခင်ဗျား။ အခုက ကျွန်တော့်မှာ security ကို လည်း disable ထားတော့ wifi လုံခြုံေ၇းအတွက်စိုးရိမ်လို့ပါခင်ဗျ။ပြီးတော့ wifi ကrouter ကတစ်လိုင်း cpeကတစ်လိုင်း နှစ်လိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျား။ ပြီးတော့download speed ကိုလည်း ကန့်သတ်လိုပါတယ်ခင်ဗျား။ download speed ကို ကန့်သတ်ဖို့လေ့လာကြည့်ရာမှာ http://http://bandwidthcontroller.com/download.html
soft ware ကိုတွေ့ရပါတယ် ။software ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျ။ သူက network card နှစ်ခုလိုပါတယ် ကျွန်တော့်မှာက နယ်မှာဆိုတော့မီတာခ တစ်ယူနစ်ကို600ပါ ။ မီတာခဈးကြီးလွန်းလို့ ကောင်တာစက် ကို desktop မသုံးနိုင်ပါ laptop ပဲသုံးရပါတယ်။ ဆိုင်ထဲကစက်ကိုလည်း desktop နဲ့လက်တော့ မျှသုံးရပါတယ်။ အဲဒါ လက်တော့မှာ network card နှစ်ခုတပ်လို့ရပါသလားသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ bandwidthcontroller software က အဲလို network card နှစ်ခု မလုပ်ချင်ရင်တော့ စက် 5လုံးပဲထိန်းချုပ်လို့ရမယ်ဆိုပါတယ်။ သူ့ထဲမှာ sever နဲ့ client ဆိုပြီး နှစ်ခု ပါတယ်။ အလုံး များများ(100ထိရ) ထိန်းချင်ရင် ထိန်းချုပ်မဲ့စက်မှာ sever ကိုတင်ရပါမယ်/client စက်မှာဘာမှမလိုပါ။ (network card နှစ်ခုလိုပါတယ်)။ ကြိုက် သလို download ကိုထိန်းလို့ရပါတယ်။တစ်လုံးချင်းအလိုက်ကြိုက်သလိုထားလို့ရပါတယ်။
network card နှစ်ခုမလို ။ ဒါပေမယ့် စက် 5လုံးထိပဲထိန်းချုပ်ခွင့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မယ့်စက်မှာ
client ကိုတင် ပြီး အထိန်းချုပ်ခံရမယ့်စက်တွေမှာ server ကိုတင်ရပါမယ်။ပြီးတော့ ဒေါင်းလုပ် speed ကို
မိမိ လိုချင်သလောက်ထိန်းလို့မရတော့ပါ။ စက်ငါးလုံးဆိုရင် ငါးလုံးစာ အော်တို အညီအမျှပဲ ခွဲပေးပါတယ်။
စက်လေးလုံးသုံးနေချိန် မှာတော့ ပထမဆုံး ဒေါင်းလုပ်စဆွဲတဲ့စက် ကကျန်တဲ့ တစ်လုံးစာ speed ကို ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့တစ်လုံးဝင်လာချိန်မှာတော့ပြန်လျော့သွားပါမယ်ခင်ဗျား။ antamedia ကလဲ
network card နှစ်ခုတောင်းပါတယ်။ အဲဒါဗျာ လက်တော့မှာusbနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် network ကတ်နှစ်ခု တပ်လို့ရမယ့်နည်းများသိရင်ဖြေကြးပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ဒါမှမဟုတ်လည်း တစ်ခြားနည်း တစ်ခြား
Crush ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကနေ စပြီး ဆွေးနွေးကြရင် ကောင်းမလဲ ....
စကိုင်းပျက် ... မှားလို့ ...... စကိုင်းနှေး ..... ဟီး .... လွဲပြန်ပြီ .... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထမင်းရှင်ကြီး SkyNet Connection ကို ယူသုံးနေကြတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ ပူးပေါင်းပြီး နှီးနှော တိုင်ပင်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ ....
တစ်ချို့ သုံးဖူးတဲ့သူတွေပြောပြချက်အရတော့ External Antenna ကသိပ်ပြီးတော့ Effect မဖြစ်သလို CPE ရဲ့ Performance ကိုတောင်ထိခိုက်တယ် လို့ဆိုပါတယ် ...။ ကျွန်တော်လည်းသုံးကြည့်သေးတယ် ....။ သိပ်အဆင်မပြေတာနဲ့ ပြန်ဖြုတ်ထားပြီး CPE သီးခြားသုံးထားပါတယ် ....။
မနက်မိုးလင်း မှပဲဝယ်တဲ့ဆိုင် ကိုမေးတော့ channel ကို 11 သို့ပြောင်းလိုက်ပါတဲ့။ အဲလိုပြောင်းလိုက် တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ခင်ဗျ။ဆိုင်နားပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေ လည်း cpe မပါပဲ ဖမ်းလို့ အဆင်ပြေသွားပါ တယ် ။
CPE Channel နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်သိထားတာက Channel 1, 6, 8, 11 တွေဟာ အကောင်းဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ တကယ်တန်းတော့ Channel ကို Automatic မှာထားပြီးစမ်းကြည့်ရင်လည်းရပါတယ် ....။ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ 1, 6, 8, 11 တွေကို သုံးကြည့်ပေါ့ ခင်ဗျာ ....။
ကျွန်တော်သိချင်တာ က တိုင်နားက ဖမ်းတာဘာဖြစ်လို့ signal တိုင်က အပြည့်မပြတာကိုပါ။ cpe နဲ့လိုင်းယူထားတဲ့သူတွေက ကြိုးနဲ့မသုံးပဲ wireless သုံးချင်ကြပါတယ် ခင်ဗျ။ အဲဒါ ဘယ် mode နဲ့ဖမ်းရပါမလဲ ခင်ဗျ။
တိုင်နားက ဖမ်းလို့မရဘူး ဆိုတာက အခြေအနေလေးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ် ....
CPE TL-WA5210G က မျက်နှာမူတဲ့ ဘက်သို့ ဘေးဘယ်ညာ ၆၀ ဒီဂရီ၊ အပေါ်အောက် ၃၀ ဒီဂရီ လွှင့်ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ တိုင်က တော်တော်မြင့်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီအောက်က နီးတဲ့သူတွေ လှိုင်းနှုန်းကျနိုင်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် CPE ကို အောက်သို့ နည်းနည်း ငိုက်လိုက်ပြီး စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
CPE ရဲ့ Wireless > Basic Setting(Wireless Settings) > Mode မှာ 54 Mbps နဲ့ 11 Mbps တို့ကို ပြောင်းပြီးစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ် ။
Wireless Mode အနေနဲ့ကတော့ (ဖမ်းမယ့်ဘက်က) Repeater (သို့မဟုတ်) Universal Repeater တွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ကိုယ် Connect လုပ်တဲ့ AP က Signal ကောင်းတာကို လှမ်းချိတ်ဖို့ဘဲလို့ ထင်ပါတယ်။
အခုက ကျွန်တော့်မှာ security ကို လည်း disable ထားတော့ wifi လုံခြုံေ၇းအတွက်စိုးရိမ်လို့ပါခင်ဗျ။ပြီးတော့ wifi ကrouter ကတစ်လိုင်း cpeကတစ်လိုင်း နှစ်လိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျား။ ပြီးတော့download speed ကိုလည်း ကန့်သတ်လိုပါတယ်ခင်ဗျား။
Security အတွက်နှင့် Download Speed ကန့်သတ်ဖို့အတွက်တော့ Antamedia Hotspot ကိုဘဲ သိထားလို့ ညွှန်းလိုပါတယ် ...။ ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းအလုပ်အားရင် ကျွန်တော်သိသလောက်လေးတွေ ရေးပြီး တင်ပေးပါမယ်။ Software ကိုတော့ ကိုညီနေမင်း ၊ ကိုနေမင်းမောင် တို့ထဲမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ Version 1.4.6 (full) ပါ။ သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် OS အနေနဲ့ Windows XP နဲ့မှ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ် ...။ နောက်ပြီး crush အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ Network Card (2) ကဒ်လိုတာတော့ သေချာပါတယ် ...။
Laptop မှာ Network Card ကို စိုက်ဖို့(ထည့်သွင်းဖို့) မလွယ်ပေမဲ့ USB Network Device တွေရှိပါတယ် ...။
အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေ/မပြေ တော့ မသုံးဖူးတဲ့ အတွက်ကြောင့် သေချာမပြောတတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ ...။ ဈေးနှုန်းက သိပ်မများတဲ့အတွက် မှာယူပြီး (နယ်ကလို့ပြောလို့ပါ) စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ် ...။ Laptop Network Sharing အကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖိုရမ်ထဲမှာ ဆွေးနွေးထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ် .....။
Antamedia Hotspot အပြင် Antamedia Bandwidth control ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ် ....။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် Antamedia Hotspot တင်ပြီးထိန်းနိုင်ရင်
Bandwidth Control လုပ်နိုင်မယ် ...။
အချိန်ပိုင်းပဲ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေကို User Name, Password တွေရောင်းပေးပြီး သုံးခိုင်းလို့ရမယ် ...။
Security ပိုင်းအရ သီးခြားထိန်းချုပ်နေစရာ/ စစ်ဆေးနေစရာ မလိုဘဲ အဆင်ပြေပါမယ် ...။
Cyber နဲ့ User ကြားမှာ ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါမယ် ...။
နောက်ပိုင်း အချိန်ရရင်တော့ ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်ဗျာ .... ကို azp09 ကိုတော့ အားကိုးပါတယ်ဗျာ ..... ။ ဖိုရမ်မှ တစ်ခြားညီကိုများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်မိပါတယ် ....။
အော် ..... မေ့တော့မလို့ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ Network Plan လေးစဉ်းစားကြည့်ထားတာပါ ....။ ဒီလိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလား အကြံပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ .....။ ( ပုံလည်းမလုပ်တတ်တော့ Paint ထဲမှာ ဆွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ....။)
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဇာနည်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, azp09, crush, minthike, tu tu
14-07-2012, 02:45 PM
Network Plan တွေကတော့ ကိုဇာနည်စိုး ပြောသလို အမျိုးမျိုး ( ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမည့် Plan ) ကိုဆင်ကြပါတယ်....
ကျွန်တော် တွေ့သလောက်ATA BOX ကအထွက်မှာ Router ထားမယ် , DHCP ကို disable ထားမယ် , AP mood ထားမယ် ဆို၇င် MAC filter လုပ်တဲ့ address ကို Router မှာထည့်ကြပါတယ် ... ကျွန်တော်တို့ Linksys wireless Router မှာတော့ mac filter လုပ်၇င် အလုံးေ၇ 50 ၇ပါတယ် ...
ကျွန်တော့်မှာ DHCP ကို disable ပေးထားပေမယ့် mac address ကို သုံးမယ့်သူတွေရဲ့ mac address ကို router မှာမထဲ့ရပဲ cpe ထဲမှာပဲ ထဲ့ပေးရပါတယ်။ အဲဒါအမှား ဖြစ်နေမလားလို့ပါ ခင်ဗျား။ အခုက ကျွန်တော့်မှာ security ကို လည်း disable ထားတော့ wifi လုံခြုံေ၇းအတွက်စိုးရိမ်လို့ပါခင်ဗျ
MAC filter လုပ်တာကတော့ Router ထဲကနေပဲ လုပ်လုပ် Cpe ဘူးကနေပဲ လုပ်လုပ်အတူတူပဲလို့ထင်ပါတယ် (ကျွန်တော် တဦးတည်း ၏အမြင်ဖြစ်ပါတယ် ) တစ်ခုတော့၇ှိတာပေါ့ ... CPE ၇ဲ့ DHCP ကို လည်း disable လည်း Disable ထားတယ် ဆိုတော့ crush ပြောသလို Router ကတစ်ခု , CPE ကတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် client တွေကို CPE transmitter ဘူးကနေ ip ချပေးတဲ့အခါ crush ၇ဲ့ D-link router DIR-615 ၇ဲ့ DHCP မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ip address range နဲ့ပဲကျလာမှာပါ .....
download speed ကိုလည်းကန့်သတ်ချင်ပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စ ကိုတော့ မလုပ်စေချင်ဘူး .... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း နဂို ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ connection က နှေး၇တဲ့အထဲ ကိုယ်ကသွားပြီး bandwidth control သွားလုပ်လိုက်၇င် user တွေ သုံးလို့ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး .... အထူးသဖြင့် နေ့ခင်းပိုင်း နဲ့ ၇ုံးချိန်တွေ ဆို၇င် အဲလို bandwidth control သွားပြီးတော့ လုပ်လိုက်၇င် connection အ၇မ်းကြီးလေးသွား ပါလိမ့်မယ် ...... နောက်ပြီး လိုင်းကောင်းနေတဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း user ဟာ internet speed ကို အပြည့်အ၀မသုံး၇ ဆိုတော့ နောက်ဆုံး " ခင်ဗျား internet လိုင်းက ကောင်းလဲမကောင်းဘူး " ဆိုပြီးတော့ user ထွက်သွားပါလိမ့်မယ် .....
အဲဒီအတွက် user တွေကို မေတ္တာ၇ပ်ခံထားလိုက်ပါ ... ဥပမာ ... မနက်9နာ၇ီမှ ည 9နာ၇ီအတွင်း ကျေးဇူးပြုပြီးဒေါင်းလုပ်မလုပ်ဖို့ ၇ာ.... အဲလိုမှ မေတ္တာ၇ပ်ခံလို့ အဆင်မပြေဘူးဆို၇င်တော့ .... Router ၇ဲ့ QOS ထဲကနေပြီးတော့ downloading အဆမတန်ပြုလုပ်နေသူ CPE ၇ဲ့ WAN Mac address ကို filter လုပ်လိုက်ပါတယ်.... ကျွန်တော့ ၇ဲ့ linksys router WRT160 NT မှာတော့ Application & Gaming > QOS (Quality of Services ) ဆိုတဲ့ထဲကနေ MAC သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ်ပေးသုံးချင်တဲ့ bandwidth ကို သတ်မှတ်လို့၇ပါတယ်....
QOS ကို သုံးဖို့အတွက် transmitter လုပ်မည့် CPE ၇ဲ့ DHCP ဟာ disable ဖြစ်ဖို့လိုပြီး ... Transmitter CPE ကို မေ၇ာက်ခင် Router တစ်ခုခံထားဖို့လိုပါတယ် ( ဥပမာ crush လက်၇ှိသုံးနေတဲ့ network plan ပုံစံမျိုးပေါ့ ) ... နောက်ပြီး Receive လုပ်မည့် CPE ၇ဲ့ WAN ip address ကို satus မှာကြည့်လိုက်၇င် Router ကချပေးထားတဲ့ ip ဖြစ်၇ပါမယ် (Transmitter CPE ကချပေးလိုက်နဲ့ ip ဆို၇င် 192.168.X.100 ဆိုပြီး default ချပေးတာများပါတယ် .... ) နောက်တစ်ခုက Router ကို 192.168.0.1 (သို့) 192.168.1.1 ဆိုတဲ့ ip မျိုးတွေမပေးဖိုပါ .... လူသုံးအ၇မ်းများတဲ့ အဲလို ip မျိုးတွေပေးထား၇င် network conflit ဖြစ်တတ်လို့ပါ .... ဥပမာ Router ကို 192.168.1.1 လို့ပေးလိုက်၇င် skynet ၇ဲ့ Gateway ဖြစ်တဲ့ 192.168.1.1 နဲ့ conflict ဖြစ်တတ်ပါတယ်...
တစ်ချိုကလည်း ATA BOX ကနေ အထွက်ကို PC တစ်လုံးထားပြီး (NIC Card2Card နဲ့ ) Server OS နဲ့ ISA Server ထိုင်ပြီး သုံး၇င် network traffice နည်းလို့ သုံးလို့ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့လဲ ပြောကြပါတယ်... နောက် ISA Server မှာ bandwidth control လုပ်လို့လည်း အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောကြတယ် ..... ကျွန်တ်ာကတော့ ISA တစ်ခါမှ မသုံးဖူးလို့ ISA အကြောင်းကို လုံးဝမသိပါဘူး .... ကျွန်တော်သုံးတဲ့ QOS ကတော့ အလွယ်နည်းပေါ့ ...
Antamedia Hotspot ကို ဘယ်လိုအသုံးပြု၇တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး ...
ကိုယ်သိသလောက် ... အကြောင်းအ၇ာ အနည်းငယ် ကိုသာ ပါဝင်ဆွေးနွေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် .... မှားယွင်းမှု , မပြည့်စုံမှုများ ၇ှိခဲ့၇င်လည်း ပြောကြပါဦး .... ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .....
ဇာနည်စိုး, သဇင်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, crush, minthike, tu tu
ပြန်လည်ဖြေကြား ပေးကြတဲ့ ကိုဇာနည်စိုး နဲ့ ကိုazp09 တို့ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
Last edited by tu tu; 16-07-2012 at 09:26 PM.. Reason: remove quote
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ crush အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော့်အထင်ပြောရရင်တော့ခင်ဗျ(ကျွန်တော့်အထင်ပါခင်ဗျာ) CPE က သူ့ရှေ့တည့်တည့်ကို အဝေးကြီးလွှင့်
ပြီးတော့ External Antenna တော့ သူ့ပတ်ပတ်လည်ကိုအညီအမျှလွင့်ပါမယ်။ CPE လောက်တော့အဝေးကြီး
မရောက်ဘူးပေါ့။ CPE ရဲ့ Performance ကိုထိခိုက်တယ် ဆိုတာက ဥပမာ ဗျာ cpe တစ်ခုတည်းလွှင့်ထား
တယ်ဆိုကြပါစို့။ လွှင့်ထားတဲ့ ဆိုင်အနီးကဖမ်းကြည့်တယ်ထားပါ။cpe မျက်နှာမူတဲ့ဘက်က ဖမ်းတဲ့အခါ signal တိုင် က5တိုင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ cpe ရဲ့နောက်ဘက် တည့်တည့်ကဖမ်းတဲ့အခါ signal က 1 တိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ Antenna နဲ့cpe တွဲလွှင့်လိုက်တဲ့အခါ အရှေ့ကဖမ်းဖမ်းအနောက်ကဖမ်းဖမ်း signal
တိုင်က 4တိုင်ဆိုရင် 4တိုင်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် cpe နဲ့လွှင့်တဲ့အခါ လောက်တော့အဝေးကိုရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျ 11 Mbps wireless (b) mode ဖြစ်သွားပြီး အဝေးကိုများများရောက်ပြီးတော့ (g)mode
လောက်တော့ speed မမြန်တော့ပါဘူးခင်ဗျ (စာအုပ်များသတ်မှတ်ချက်အရပါ)
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျ Repeater , Universal Repeater mode တွေနဲ့ဖမ်းကြည့်ပါတယ် ခင်ဗျ။ Ap mode
နဲ့ပါပဲ။ signal ကလဲ 50 db ထိတောင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲတစ်ခုရှိတာက DHCP ကိုတော့Disable ပဲထားပါတယ်။ Enable မှမလုပ်တတ်တာကိုး မလုပ်တတ်ဆိုတာ Default GatewayးDefault Domain: Primary DNS: Secondary DNS: ထည့်တဲ့အပိုင်းကိုပါ ခင်ဗျ။ လွင့်တဲ့ဖက်မှာရော
DHCP ကို ENABLE လုပ်ဖို့လိုပါလားခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကအခုမှ ဆိုင်ဖွင့်ခါစဆိုတော့ဗျာလိုင်းပေးထားတာ4လိုင်း ပဲရှိပါတယ်။ ဒီလကုန်ရင်တော့ ၇ုံးတစ်ရုံးက ၅လုံးယူမယ်လို့လာပြောပါတယ် ။အဲဒါဗျာ အဲလိုဆိုရင် Wireless နဲ့မဖြစ်မနေထားပေးရမယ့်အနေအထားပါပဲခင်ဗျ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ကူညီကြပါဦးဗျာ
Download Speed ကန့်သတ်ဖို့အတွက်တော့ ကတော့ ကိုazp09 ပြောသလို QOS ကို သုံးဖို့အတွက်လုပ်
လိုက်ပါဦးမယ်။ USB Network ကတ်အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ
အစ်ကိုတို့ ပြောပြချက်များ အရ cpe 4လုံးနဲ့ဆို ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျ။
အင်တာနာ တိုင်ကိုမ၀ယ်ပါဘူးဗျာ CPE နဲ့ သူနဲ့ကဈေးအတုတူပါပဲဗျာ။ ပိုက်ဆံအဆင်ပြေတော့မှပဲ CPE ပဲပြောင်းတပ်ပါတော့မယ်။ ကိုဇာနည်စိုး မှာ CPE သုံးဘူး သုံးထားတာလား ။သုံးလုံးနဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်သုံးလုံးပဲတပ်တော့မယ်ဗျာ။
အဲလိုသုံးလုံးတပ်ထားမယ်ဆို ရင် လိုင်းက3လိုင်းဖြစ်နေမှာလားအစ်ကို ။ ပြီးတော့ အစ်ကိုဆွဲပြထားတဲ့ပုံမှာ AP1 က DHCP Enable နောက်နှစ်ခုက ကျ
ိDHCP Disable ထားပါတယ် အဲလိုအတိုင်းထားရပါမလားအစ်ကို ။ပြီးတော့ channel က လည်းတူလို့မရဘူး
ပေါ့နော် အစ်ကို ။့ hotspot တော့အတွက် ကကျွန်တော့မှာ က window7ပါ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ခင်ဗျား ။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိနေကြပါစေခင်ဗျား
azp09, minthike, tu tu
ကိုazp09 ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အမှန်တော့ ကျွန်တော်လည်း download speed ကို
မကန့်သတ်ချင်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့်မြို့က ကျဉ်းကျဉ်းလေး ရယ်။ နည်းနည်းတတ်တာနဲ့ များများပညာပြချင်တဲ့သူ
တွေ၇ှိနေပါတယ်. .. ဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့ နွားခြေရာခွက်ထဲကဖားလိုပါပဲ....မပြည့်တဲ့အိုးဘောင်ဘင်ခတ်
တဲ့သဘောတွေ ဒီမှာအများကြီးရှိနေပါတယ်...ကျွန်တော့်တို့နယ်မှာက အခုမှအင်တာနက်ဆိုင်တွေပေါ်လာစပဲရှိပါသေး
တယ်။ အဲဒါရန်ကုန်ရောက်ဖူး၊ download manger တွေသုံးတတ်ရုံ၊ ကိုညီနေမင်းတို့ ကိုနေမင်းမောင် တို့
တင်ပေးထားတဲ့ wifi key hack နည်းစာအုပ်တွေဖတ်တတ်ရုံနဲ့(ဖတ်ပဲဖတ်တတ်ကြတာပါ၊အသုံးမပြုတတ်ကြပါ)
ိကျွန်တော့် ဆိုင်မဖွင့်မှီကျွန်တော့်ကိုချိန်းခြောက်ကြပါတယ်။ လိုင်းပေးရင် လိုင်းကျသွားအောင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်
မယ်။ WIFI KEY ကို ခုိးလိုက်မယ်တို့ဗျာ။ အဲလိုလိုင်းခိုးသုံးတာတော့စိတ်မပူပါဘူးဗျာ။ အဲလိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့
လိုင်းကျသွားမှာကိုပဲစိုးရိမ်တာပါ။ ကျွန်တော့် ရဲ့အခြေအနေကိုသိအောင်ပြောပြနေတာနဲ့ပဲ စကားလမ်းကြောင်းလွဲကုန်
ကိုazp09 ပြောသလို ဒီမှာမေတ္တာ၇ပ်ခံလို့ အဆင်ပြောမဟုတ်ပါအစ်ကို .... ကျွန်တော့် ရဲ့ router ထဲမှာ
Qos Engine ဆိုတာတော့ပါတယ် ....တစ်လုံးချင်းဆီကို တော့ filter လုပ်ဖို့တော့မပါဘူးခင်ဗျ
Automatic Uplink Speed နဲ့
Manual Uplink Speed ပဲပါတယ်။ manual ထဲမှာတော့ kbps ကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Router ip က 192.168.0.1 ပါ ၊ Cpe က 192.168.0.2 ပါ။ Router ကိုsetting ချတုန်း ကလည်း အကုန် auto နဲ့ပဲသွားထားတာပါ... တကယ်တော့မပြောင်းတတ်လို့ပါခင်ဗျ...
DHCP IP Address Range ကလည်း 192.168.0.100 to 192.168.0.199 ပါ username နဲ့
password တော့ပြောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျ....အခုမှ ip တွေ range တွေပြောင်းမယ်ဆိုရင် လိုင်းပေးထားတဲ့
သူတွေကိုလိုင်းပြန်ဖမ်းပေးဖို့လိုပါလားခင်ဗျား....အဲလို အော်တိုထားလို့လားမသိပါဘူးခင်ဗျား ဆိုင်ထဲကစက်တွေ
မှာ ရော လိုင်းပေးထားတဲ့စက်တွေမှာရော IP Address တွေထည့်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျား.... Obtain ထားလိုက်ရုံပါပဲ... တစ်ခြားဆိုင်တွေမှာတော့စက် တစ်လုံးချင်းစီမှာ ip တွေထည့်ထားတွေ့ဖူးပါတယ်ခင်ဗျား....
အဲဒါ ကျွန်တော့မှာမှားနေသလားလို့ပါ။ မှားနေတာတွေ့ရင်လည်းပြောပြကြပါခင်ဗျား အထူးသဖြင့်အဲလိုလိုက်ထည့်
ရပြီဆိုရင် ကျွန်တော်က ကိုယ့်စက်တွေမှာ ဘာ DNS server ကိုထည့်ရမယ်မှန်းလည်းမသိပါ...ဘယ်IP ကို
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ crush အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Phone Nyi Nyi Soe
ပို့စ်9ခုအတွက် 28 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်းပဲ wifi လွှင့်ထားပါတယ်..CPE သုံးဘူးနဲ့ပါ...Omini နဲ့ဆိုပိုကောင်းပါတယ် ...အဲဒီတုန်းက omini မ၇သေးလို့ CPE သုံးဘူးနဲ့လွှင့်ထားတာပါ ...Server က AP နဲ့လွှင့်ထားတာကို ကျန်နှစ်ဘူး က Router လုပ်ပြီး တစ်လိုင်းထဲ ပေါ်အောင်လွှင့်ထားတာပါ ...Customer တွေဖက်က တိုင်တွေကတော့ Router နဲ့ ပြန်ဖမ်းထားတာပါ..တစ်မိုင်ခွဲလောက်သွားပါတယ် ...Computer Server က window xp .. ပြီးတော့ hotspot က antamedia hotspot နဲ့ပါ..
နာရီအကောင်တွေ ပေးသလို ... လပေး အကောင်တွေ လည်းပေးပါတယ် ... အကောင့်တွေရဲ့ Download speed တွေကိုလည်း သတ် မှတ်ပေးလို့ရပါတယ် ... Customer တွေရဲ့ စက်တွေက Ip တွေကိုလည်း antamedia က dhcp နဲ့ချပေးတာကြောင့် Customer စက်တွေရဲ့ IP တွေကို auto ထားပေးလို့ရပါတယ် ... antamedia hotspot ကိုတော့ အပေါ်က နောင်တော်များ ပေးထားပါတယ် ...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Phone Nyi Nyi Soe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Phone Nyi Nyi Soe ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Phone Nyi Nyi Soe
usmarinearmy ရေ.. Browser ဖွင့်တာနဲ့ user name ရော password ရော ပေါ်အောင် Ccproxy ကိုသုံးပါတယ် ...
Ccproxy အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ရော..Software ရော ကိုရာမညဖိုးလပြည့် တင်ထားတာရှိပါတယ် ..Forum မှာရှိတဲ့ ညီကိုတွေဆီမှာတောင်းလိုက်ပါ ...
Kyaw Kyaw Sint Hlaing
ပြန်စာ - CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း- (အပို&a
ကျွန်တော်နားမည်တာက လွှတ်တဲ့ဘက်က 192.168.10.1 ဆိုရင် ဖမ်းတဲ့ဖက်က 192.168.10.X ပဲဖြစ်ရမလားလို့။ Net ID တူရမယ်ထင်လို့ပါ။ နားမလည်လို့နော်။ ရှင်းပြပေးပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Kyaw Kyaw Sint Hlaing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Kyaw Kyaw Sint Hlaing ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Kyaw Kyaw Sint Hlaing
18-07-2012, 07:23 PM
ဟုတ်ကဲ့ မရပါဘူး ကိုKyaw Kyaw Sint Hlaing ရေ ဘာကြောင့်မရလဲတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိတော့ သိတဲ့အကို ကြီးတွေ
ကိုဇာနည်စိုး မှာ CPE သုံးဘူး သုံးထားတာလား ။သုံးလုံးနဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်သုံးလုံးပဲတပ်တော့မယ်ဗျာ။
အဲလိုသုံးလုံးတပ်ထားမယ်ဆို ရင် လိုင်းက3လိုင်းဖြစ်နေမှာလားအစ်ကို ။ ပြီးတော့ အစ်ကိုဆွဲပြထားတဲ့ပုံမှာ AP1 က DHCP Enable နောက်နှစ်ခုက ကကျ DHCP Disable ထားပါတယ် အဲလိုအတိုင်းထားရပါမလားအစ်ကို ။ပြီးတော့ channel က လည်းတူလို့မရဘူး
အထိုင် (Base)(စပြီးလွှင့်ပေးမဲ့နေရာ) မှာ CPE (၃)လုံး ထားမယ်၊ (၄)လုံးထားမယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဆီက Connection ကို ယူသုံးမဲ့ သူတွေအနေနဲ့ Base ရဲ့ ဘယ်အရပ်မျက်နှာတွေမှာ ရှိနေလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာဘဲ မူတည် မယ်ထင်ပါတယ် ...။ ဆိုလိုတာက ဥပမာ - သုံးမဲ့သူ (၄)ယောက်ရှိပြီး သူတို့ အကုန်လုံးက ဆိုင်(Base) ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာချည်းဘဲဆိုရင် Base မှာ AP (CPE) တစ်လုံးတည်းနဲ့ လွှင့်ပေးလို့ ရပါတယ် ...။ သုံးမဲ့သူ (၃) ယောက်က အရှေ့ဘက်မှာ (၁) ယောက်ကတော့ အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ CPE (2) ဘူးလိုမယ် ....။ ကံဆိုးစွာဘဲ သုံးမဲ့သူ (၄) ယောက်က အရပ်လေးမျက်နှာဖြစ်နေရင်တော့ (၄) ဘူး သုံးရမယ် လို့ ဆိုလိုတာပါ ....။
CPE (၃) လုံးတပ်ထားရင် လိုင်း (၃) လိုင်းဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရသလို Phone Nyi Nyi Soe ပြောသလို တစ်လိုင်းတည်း ဖြစ်အောင်လည်း လုပ်လို့ ရပါတယ် ...။ ကိုယ့်ရဲ့ အခြေအနေအရ Configuration ၀င်လို့ရ ပါတယ် ...။ လိုင်း(၃) လိုင်း ဖြစ်အောင် ဆိုတာကတော့ သုံးဘူးလုံးကို AP Mode နဲ့ Configuration ၀င်ပြီး Network Cable သုံးချောင်းနဲ့ သွားလိုက်ရင် ရပါတယ် ....။ ( AP Mode နဲ့ ချည်း လွှင့်ပေးလိုက်တော့ CPE ကိုလည်း Loading သက်သာစေမယ် ထင်လို့ပါ ...။ မဟုတ်ရင် CPE က ဖမ်းလည်းဖမ်းပေးရမယ် ... လွှင့်လည်း လွှင့်ပေးရမယ် .... ဒီကြားထဲ သူ့ ထဲက ဆွဲသုံးတဲ့သူတွေကလည်းများမယ် .... သုံးတဲ့သူတွေကလည်း Download မညှာမတာ လုပ်လာမယ်ဆိုရင် အဲဒီ CPE ကတော့ သနားစရာ ကောင်းနေမှာပါ ... .။)
တကယ်တမ်းကျတော့ DHCP ကို Disable လုပ်ထားရင်လည်း ရပါတယ် ....။ Hotspot တင်မှာဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ Hotspot က ထ,ထ ဖေါက်တတ်တယ်ပြောပါတယ်(Error) တက်တယ်ပြောတာပါ။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ DHCP ပေးထားတဲ့ အလုံးနဲ့ IP ထည့်ပေးပြီး စမ်းနိုင်အောင်စဉ်းစားကြည့်ထားတဲ့သဘောပါ။
Channel ကတော့ မတူရင်ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ (အတိအကျမရှင်းပြတတ်ပေမဲ့ Channel မတူတဲ့အတွက်ကြောင့် Connection တွေကြားမှာ ရှုပ်ထွေးမှု မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ ယူဆမိလို့ပါ ...။) များသောအားဖြင့်တော့ Channel ကို Automatic မှာထားရင်လည်း ရပါတယ် ....။
Hotspot ကတော့ Windows7မှာတစ်ခါတစ်လေ အဆင်ပြေတဲ့သူတွေရှိတယ် ကြားပါတယ် ...။ (ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့ မသိပါ။) Windows XP မှာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
azp09, crush, minthike, PyaitSone, tu tu